Blocky Knight ဟာ (Blocky Knight) - 2Game
Blocky Knight ဟာ (Blocky Knight)
အံ့သြစရာမြေများမှတဆင့်တို့သည်ကြီးစွာသောခရီးစတင်ထလေမှအနိုင်ယူဖို့မကောင်းသောအမိကျောင်းအပြည့်အဝနှင့်မော်ကွန်း Quest များ!
အသစ်သောသူရဲကောင်းများစုဆောင်းနှင့်၎င်းတို့၏ကြောက်မက်ဘွယ်အင်အားကြီးရှာဖွေတွေ့ရှိ! သင်အမြဲတစ် Knight ဟာ, Panda ဆာမူရိုင်းသို့မဟုတ် Ganderp အဆိုပါအပြာရောင်အဖြစ်ကမ္ဘာကချွေတာ၏အိပ်မက်မက်ခဲ့သလား အခုတော့သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းပါ! Blocky Knight ဟာ featuring, သငျသညျအပြည့်အဝ RPG-တူးဖော်ရေး-ပြေးသမားအတှေ့အကွုံကမ်းလှမ်း:
* စွဲလမ်း, ပြောင်းလဲနေသောဂိမ်း – ပုံမှန် “git Gud” စက်ပြင်
* အဆင်ပြေထိန်းချုပ်မှု – သင်သာအခြားတစ်ဖက် (မကောင်းသောမှင်တစ်ဦးခေါင်းကိုကိုင်ထားလိုမျိုး) အခြားအရာတစ်ခုခုများပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးတာအလုပ်ရှုပ်အခါအခြေအနေများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောစေသည်သောဤဂိမ်းကစားရန်တဦးတည်းကိုလက်ညှိုးလိုအပ်ပါတယ်
ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် * အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောကမ္ဘာ, ကောင်းတဲ့နှင့် comfy, ထိုသူအချို့တို့သည်ကြောက်စရာကြောက်မက်ဘွယ်သောထောင်ချောက်များအပြည့်အဝထိုသူအချို့တို့သည်!
* ဇာတ်ကောင်တိုးတက်မှု – အတွေ့အကြုံနှင့်အဆင့်အထိတက်စုဆောင်းရန်မိကျောင်းနှင့်ပြည့်စုံတာဝန်များကိုကိုသတ်!
တဦးတယောက်တည်းနောက်ဆုံးအစွန်အဖျား – သင်ပြေးနေစဉ်အတွင်းစုဆောင်းသောအရာကိုသတိထားစေသတည်း
Android အတွက် Blocky Knight ဟာ (Blocky Knight) အလွန်ရေပန်းစားသည်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဂိမ်းကစားထောင်ပေါင်းများစွာ၏မည်သည့်ငွေပေးချေမှုမပါဘဲရဖို့အတှကျဝမျးသာပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်ကူညီနိုငျပါသညျ! အခမဲ့ဂိမ်းကို download လုပ်ပါရန်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သောဖိုင်ကိုရွေးသင် file ကိုရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ Blocky Knight ဟာ (Blocky Knight) apk download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှငျ့သငျတက်ဘလက်သို့မဟုတ်ဖုန်းများအတွက်ဂိမ်းအပြည့်အဝဗားရှင်းခံစားကြသည်! မိုဘိုင်းဂိမ်းကိုခံစားဖို့အကောင်းဆုံး gadgets တစ်ခုမှာ iPhone ကိုဖြစ်ပါသည်, Blocky Knight ဟာ (Blocky Knight) iOS အတွက်ထိပ်တန်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုငွေပေးချေခြင်းမရှိဘဲပြုလုပ်ကစားရန်သင့်ကိုကူညီနိုငျပါသညျ! iPhone အတွက် Blocky Knight ဟာ (Blocky Knight) ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့, ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိရိယာ၏မော်ဒယ်ကို select ရန်သင့်အားအကြံပြု, ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ကအသင့်တော်ဆုံးဂိမ်း app များကိုရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သော .ipa ဖိုင်ကိုရွေးသင်ကစားပွဲရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ Blocky Knight ဟာ (Blocky Knight) ကို download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှင့်သင်အိုင်ပက်သို့မဟုတ်, iPod တို့အတွက် Blocky Knight ဟာ (Blocky Knight) ခံစားနေကြသည်။ ထိုအသတိရ! ကျနော်တို့နေ့စဉ်အခမဲ့ IPA ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုကို update ဒါညှိနေဖို့!